Dukkanaan Duuba (Oromo Drama) by Dhaba Wayessa Part 1, 2, 3 - Ayyaantuu News
Dukkanaan Duuba (Oromo Drama) by Dhaba Wayessa Part 1, 2, 3 6 comments - What do you think? Posted by admin - 14/03/2013 at 8:43 am Categories:
6 Responses to “Dukkanaan Duuba (Oromo Drama) by Dhaba Wayessa Part 1, 2, 3”
Keebek says:	14/03/2013 at 11:31 am	Dhugumatti waan bareedadha hojiin obbo Dhaaba Wayyeessa. Garuu Godaanisaa fi Dukkana Duubaa hojii biraa (hojiin gaazexessummaa kan VOA akkuma jirutti ta’ee) Afaan Oromootin hojjatee uummataaf dhiyyeessu maalif dadhabee laata? Halkan Dorrobaa Fiilmii jedhu hojjata akka jiru dhagaheen ture garuu ni ture. Egaa kan argatan irra kan eeggatantu caala nuuf jabaadhu Dhaaba keenya si eegganna.
Camadaa Mogolee says:	14/03/2013 at 5:03 pm	Inspiring! Baayyee galatooma Obbo dhaaba fi Obbo Tesfayen akkasumas warrii draama keessatti qooda fudhataan. Obbo Tesfayen Finfinnee ta’aani ojjetuu jechuudhaa yommuu Obbo dhaaban Amerikaa ta’ani ojjetan? Galatooma ammas!
Kumsaa says:	16/03/2013 at 12:43 am	Waan heddu nama gammachiisu. Namni qooda irratti fudhattan hundi keessanuu galatoomaa. “Ayyaantus” waan qabiyyee gaarii akkanaa qabu uummata Oromoof yeroo hundaa diyeessuu isaatin haa galatoomu.
Ilmaan Oromoo, warri amma hardhaatti akka ilmaan Oromoo tokko hin taane gochaa jiran, diina caala diina uummata isaanitti ta’an, gantuufi gunamtuu ta’an akka doo’annaa kana irraa barumsa argatan abdiin qaba. Warri duraan hin argine akka ilaalan, otoo “diraaman” kun hooggantoota dhaabilee Oromoo addaddaatif ergamee. sammuu isaanii keessatti galee yaada isaanii (yaada warraa diina Oromoo gargaaruu) jijjiiruu danda’a.
“Dukkannas yoo jabaatanii tokkummaan ka’anii dhiiban ifatti jijjiiramaa, ergaa sabboonota ilmaan Oromoo (obbolaa keenyaa) kana yeroo tokko illee otoo hin irraanfatin waan nurraa barbaachisu, akkumma dandeettii keenyatti bilisummaa uummata keenyatiif buusutu nurra jira.
Araarsoo says:	16/03/2013 at 1:34 pm	Goota jechuun namoota akka Dhaaba Wayyeessaa fi Tasfaayee Mokonnin faa ti. Goota jechuun nama aarsaa barbaachisu kaffalee ummata isaaf hojii dansa ta’e hojjetu. Namoonni keenya oggummaa adda addaa irratti hirmaatan hunduu ogummaa isaaniin ofis tajaajilaa Oromiyaa tajaajilu dha. Ispoortii keessatti, muuziqaa keessatti, saayinsii fi tekinooloojii keessatti, barnoota keessatti, hojii miidiyaa keessatti, waraana keessatti, …gootota heddumminaan horachuu qabna.
Dhugaa Sirrii says:	21/03/2013 at 5:34 am	Oromo yeroo draaman kun itti hojjatame fi hardha ammoo waan qabsoon ummata Oromoo keessa jirtu keesuma warri nuti qabsaahota ofin jedhan hundu dramaa kana yeroo ilaalan maaltu isaanitti dhagama laata? Deebii kanaa isaanuma warra biyya faranjii taaée qabsoo Oromoo gaggeesinee ummata oromo gabrummaa irra bilisa baafna jechudhan ummata Oromoo afaan fajjesaniifan dhiisa.Yeroon kana jedhus silaa jarri kun yeroodhuma tokko waan keessa dabranii fi hardha keessa jiran guyyuma tokko of-gamaggamanii beekulataa? gaafii jedhuti natti dhagame.Waan hundaafuu diraaman kun heddu onnee namaa kakaasa waan tahef tarii warri qobsoo Ummata Oroomo gageesina jedhan kun osoo irra deebiánii ilaalani maal keessa jirra jedhani akka of-gaafatanii fi barnoota iraa argatan isaan gargaara jedhe amana.
Dumarratti ilmaan Oromoo draamaa kana qopheesani irratti qooda fudhatan hundi isaanii haa galatooman jedha .
Akkattii A.Awweetuu says:	18/04/2013 at 1:53 pm	Kabajamaa Gaazixeessaa Dhaabaa W.haalli hunduu baay’ee nama gammachisa! Garuu Asoosama kee Goddaanisa jettu namoota kuman lakka’amantu barbaada waan ta’eef maaf nuuf hin maxxansiftan? Galtooma!